Ukuphupha ubaleka Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba ungxamile, kufuneka ubaleke, ungxame, ubaleke okanye ubaleke. Omnye uthi "Thatha imilenze yakho ngesandla"xa kufuneka uye kwenye indawo ngokukhawuleza. Ngamanye amaxesha ugqatso lukwangumsebenzi wezemidlalo okanye ugqatso lokujonga ukuba ngubani ogqiba ngokukhawuleza.
Le misebenzi inokwenzeka kwakhona kwi el mundo yamaphupha. Nangona kunjalo, ukutolika ngokuchanekileyo la maphupha, ziinkcukacha ezibalwayo. Sibalekela phi ephupheni? Ngaba siyntywila silandela umntu okanye sibaleka kuba sibaleka emntwini?
1 Uphawu lwephupha «ukubaleka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukubaleka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «run» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukubaleka» - ukutolikwa ngokubanzi
Kuphando lwamaphupha, ikhondo lomsebenzi lihlala litolikwa njengophawu lwendlela eliphumelela ngayo iphupha ebomini bokuvuka. Ukuba ubaleka kumdyarho weembaleki ngelixa uleleyo kwaye uphumelele, mhlawumbi woyisa iqela labachasi, uya kuba ulungile kwihlabathi elivukayo. Ukuzithemba unayo.
Ukuba ukuphupha uzibona ebaleka ngokukhawuleza, lo mfanekiso uphupha luphawu loloyiko okanye iimvakalelo, zokungabi luxabiso lukhulu okanye lokungenzi ngokwaneleyo. Umntu onomdla kufuneka asebenze kwesi simo sengqondo, kuba umntu ngamnye unexabiso kunye nendawo yakhe eluntwini, kufuneka nje bayifumane.
Ngokubanzi, olu phawu lusenokusetyenziselwa ukutolika amaphupha njenge isilumkiso Iyavela. Iphupha akufuneki lingxanyiswe kwaye akufuneki lingxanyiswe kwaphela. Umzimba awufanele uxhatshazwe. Ukuba iphupha lihlala liqhubeka emva koko, le meko ikhomba ithuba elilahlekileyo kwihlabathi lokuvuka.
Lo mfanekiso wephupha ungabhekisa kwi umngcipheko bonisa ukuba ungalahla imbiza kwenye indawo. Umsebenzi osoloko uqulethe ingozi yokuba abanye bafuna ukuphikisa impumelelo yephupha. Nangona kunjalo, ukuba uphumelele ugqatso, ungaboyisa abachasi bakho nokuba uvukile.
Ukuba iphupha eli lijongana nomdyarho, ke uphando lwamaphupha lutolika lo mfuziselo njengomkhondo wenye. I-Oportunidad, apho umphuphi kufuneka athathe isigqibo ngokukhawuleza kwaye akhuthaze ukuba akafuni kuphoswa. Ukuba umphuphi ujonga iimbaleki ezibaleka ngokukhawuleza kwaye zoyise imiqobo enjengemiqobo okanye ipaki, iqela elinomdla licinga ngemeko yakhe yobomi ngamandla amakhulu. Uyangena ityala ungumzekeliso kuwe kwaye uzibuze ukuba bunjani ubomi bakho ngaphandle.
Ukuba awukwazi ukubaleka kwaye awunakukwazi ukusuka kuloo ndawo xa usenza amaphupha, oku kuhlala kubonakalisa ukuswela kwakho inkuthazo yokufezekisa injongo. Umphuphi mhlawumbi uyawuthintela nawaphi na umzamo onokuthi uhambelane noku.
Uphawu lwephupha «ukubaleka» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yephupha kutolika ugqatso ephupheni njengesiqhelo. Ukuphupha kwinqanaba loxinzelelo. Iphupha liyakuthatha ukuphefumla kwakho. Ephupheni, ubaleka ngokuqhubekayo kwaye ngamanye amaxesha akucaci nokuba kutheni esenza njalo.
Amaphupha esigaba soxinzelelo ngokubanzi abonisa oku Isingqi sobomiamaphupha anayo kwihlabathi lokuvuka. Kuyarekhodwa kusetyenzwe ephupheni. Ukusuka apha kulandela ikhondo lomsebenzi ophelisa ukulala nokuba sekuleleni. Uziva ungxamile kwaye uxinezelekile xa uvuka.
Amaphupha anjalo ahlala ebizwa isilumkiso yomzimba, efuna ngokungxamisekileyo ikhefu ukuze iphinde ibuye kwakhona kuxinzelelo lwemihla ngemihla. Ukulala ngobusuku obunye akusakwanele ukuba kuhambisane nemini. Utshintsho olusisiseko kwisantya sobomi luyimfuneko apha ukuba umzimba awunakwenzakaliswa ixesha elide.
Uphawu lwephupha «run» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lokomoya, ubuhlanga luphawu olo qalisa kwakhonaethi kule meko ibe nesingqisho esiphakamileyo.